Platini oo u tartamaya xilka madaxweynaha Fifa - BBC News Somali
Platini oo u tartamaya xilka madaxweynaha Fifa
Image caption Gudoomiyaha Xiriirka Kubadda Cagta ee Yurub ee UEFA, Michel Platini.
Gudoomiyaha Xiriirka Kubadda Cagta ee Yurub ee UEFA, Michel Platini, ayaa goor dhaweyd ku dhawaaqay in uu u tartamayo xilka madaxweynaha Xiriirka Kubadda Cagta Adduunka ee FIFA.
60-jirkan khadka dhexe kaga dheeli jiray xulka Faransiiska, ayaa waxa uu warqad u diray madaxda iyo xoghayayaasha guud ee xiriirada kubadda cagta ee 209-ka ee xubnaha ka ah hay’adda maamusho ciyaaraha adduunka ee FIFA, ayaa waxa uu ku sheegay: “In go’aanka uu si taxadar badan uu shakhsi ahaan u gaaray.”
Hadaba gudoomiyaha Xiriirka Kubadda Cagta Adduunka Sepp Blatter, oo ay da’diisu tahay 79, ayaa xilka ka degayaa bisha Febraayo ee sanadka soo socda kaddib markii uu guddiga maamula ciyaaraha kubadda cagta adduunka ee FIFA ay soo wajaheen dhibaatooyin dhanka musuq maasuqa ah.
Image caption Cali Bin Xuseen, Gudoomiyaha Xiriirka Kubadda Cagta ee Urdun.
Musharaxnimada Platini ayaa waxaa ka soo horjeestay Boqor Cali Bin Xuseen oo war saxaafadeed oo uu soo saaray ku sheegay in Platini uusan u wanaagsanayn FIFA.
Waxa uu sheegay in ciyaaryahanada iyo taageerayaasha kubadda cagta ay mudan yihiin wax wanaagsan.
Isagoo intaa raaciyay in FIFA ay u baahan tahay hogaamiye cusub oo madax banaan oo aan falal hore ku lug lahayn.